Uhlobo lwe-duck | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Uhlobo lwe-duck
Abalimi abaningi nalabo abaneziqephu zangasese, izilwane ezizalisayo ekhaya. Uma kukhona isisekelo sokwanela okwanele ukuba uhlanganyele ekuhambiseni izilwane akuyona neze nzima, ikakhulukazi njengoba izinzuzo zomsebenzi onjalo zikhulu kakhulu. Awukakhulumi nje kuphela inyama, kodwa wazi konke ngokuvela kwayo.
Uhlobo oluvame kakhulu lwamadada
Kunoma yimuphi umkhakha wangasese kukhona igceke lenkukhu lapho izinkukhu zihlala khona. Kodwa abaningi bakholelwa ukuthi inyama yenkukhu iye yaba yansuku zonke, kodwa inyama yodada ibhekwa njengento enhle kakhulu. Cishe wonke umlimi uzama ukukhulisa amadada abo asekhaya. Ukwenza ngokufanele ukhetho lokuzalanisa amadamu, ungakwazi ukuhlinzeka kakhulu ngetafula lakho inyama, futhi wenze imali enhle ngokuwathengisa.
Konke okubaluleke kakhulu ngokuzalisa amadada aseBashkir ekhaya
Idada yaseBashkir ibhekwa njengenye yezinhlobo ezinhle zeqanda nenyama. Ngaphezu kwalokho, kungenakuzithoba ekunakekeleni, okungabizi futhi kubhekene nokuzivikela okuqinile nokukhuthazela. Izinto ezikhethekile zokukhuphula amadada aseBashkir, izinzuzo nezinkinga zayo zizoxoxwa kulokhu okushiwo. Incazelo yesibeletho Hlanganisa izinkukhu ziqale ngencazelo emfushane.
Indlela yokukhiqiza intandokazi ye-duck ekhaya
Namuhla sinikeza ukunaka intandokazi eluhlaza okwesibhakabhaka evamile phakathi kwabalimi kulokhu kuzalwa kwamadada asekhaya: bona izici ezihlukile zodada, incazelo yemfanelo yayo kanye nezithombe ezihlukahlukene. I-Blue Favorite iyizinhlobo zamadada asanda kungena emakethe futhi athola ukuthandwa okukhethekile phakathi kwabalimi.
Indlela yokugcina amadada ama-Star-53 ekhaya
Isihloko sendaba yanamuhla yi-Star-53 broiler duck, ebizwa nangokuthi "i-Peking duck". Lokhu kuyindlela engcono kakhulu emadada asekhaya asekhaya, njengoba ukuthambekela kokuya endleleni yokuphila enempilo kusikhuthaza ukuba sinqabe ukudla okunamafutha. I-Peking duck inikeza inqwaba yezinambuzane ezihlwabusayo, kodwa hhayi amafutha, okuyizimfanelo ezihlukene zokudla.
Indlela yokuzala amadada asePeking ekhaya
Uma usungusha embonini yenkukhu futhi unquma ukuqala isipiliyoni sakho ngokuzalisa i-duck, "ukukhipha" kuyindlela engcono kakhulu yokuqala! Lokhu kuwuhlobo oludala lwamazinyo ezinkukhu, okusetshenziselwa ngempumelelo ekuzaleni ukuzalana kwezinhlobo ezintsha ezintsha. Lezi amadada zigcwele yonke indawo kokubili ezimbonini nasemapulazini amancane, futhi zithole udumo oluhle ngenxa yokungazethembi, ukukhula okusheshayo nokudla okunomsoco nokulinganisela kakhulu.
I-Gogol duck: isithombe nencazelo
Inkukhu yeGogol iyinyoni yomndeni wodada onendawo enhle kakhulu kanye nedatha yangaphandle ekhanyayo, okubhekwa ngayo njengenye yezinhlobo ezimibalabala zomndeni wayo. Lapho le nyoni ihlala khona, lokho okukudlayo nokuthi yiziphi izici zendlela yayo yokuphila - lezi zindaba nezinye izinto zizocatshangelwa okuqhubekayo kulesi sihloko. Incazelo kanye nezici zezinhlobo zezilwane. I-Gogol evamile iyidada eliphakathi kwamasayizi aphakathi nendawo enezici zangaphandle ezihlukile.
Idada yawela nge-goose: incazelo ye-Mulard duck breed
Izinhlobo zezinkukhu zama-hybrid zithathwa ukuze kuthuthukiswe izinkomba zokusebenza, ukuhlanganisa ukufaneleka kwezihlobo eziningana, ukubhebhethekisa izinkinga. Lesi sihloko sizinikezelwe kwisixube saseMulard, kuyo sizokwazi umlando kanye nencazelo yohlobo, kanye nezimfihlo zokukhula. Umlando wezinkomo Igama elithi "mulard" libolekwa ngesiNgisi futhi livela ngamagama athi "i-Muscovy duck" nelithi "mallard", okusho ukuthi umsk duck no-mallard.
Ama-Bashkir amadada: Izitayela, Izinzuzo kanye ne-Cons
Ingabe umnikazi wepulazi ngalinye uyashesha ukuthola ukuthola isikhathi sokunquma ngombuzo wukuphi uhlobo lwezinkukhu ezilula futhi ezomnotho ekutshalweni nasekugcineni. Futhi uma usuvele unayo noma unezinkukhu, ama-turkeys, goose, amadada, ikakhulukazi abameleli besizwe saseBashkir, nakho kuyindlela enhle yokukhiqiza inyama nemikhiqizo yamaqanda.
Duck White White: incazelo yesiphambano, izimpawu zokugcina ekhaya
I-Blagovarskaya duck iyinyoni, hhayi nje ukuhlobisa noma yiliphi igceke elibonakalayo elikhangayo, kodwa futhi liyakwazi ukujabulisa ngenani elikhulu lamaqanda nezinyama ezihlwabusayo. Ukuqukethwe okulula nokungahlehlisi kuyenze kube yinto enhle kubalimi nokulima. Isimo sokuzola, ukukhiqiza okuhle, ukumelana nezifo - konke lokhu kwenza udada ube izinkukhu ezinhle kakhulu.
Uhlobo lwe-Cayuga ducks: kanjani ukunakekela nokuthi ungondla kanjani ekhaya
I-dayu yaseMelika enhle kakhulu e-Cayuga iyi-frequenter yezimbukiso ezihlukahlukene zamazwe ngamazwe. Futhi lokhu akumangazi, ngoba inqwaba yayo emnyama eyingqayizivele ene-tint eluhlaza okwesibhakabhaka futhi iveza ukukhanya kwe-metallic yenza kube yinto ehlukile phakathi kwezinye izinhlobo. Kodwa-ke, ukubukeka akuyona nje inzuzo yenyoni, ibuye ibe namazinga aphezulu okukhiqiza, iqhutshwe kahle, futhi inyama yayo inambitheka encane, eyinkimbinkimbi futhi enomnandi.
I-Broiler duck agidel: izici zokuzalanisa ekhaya
Igama elithi "broiler" likhumbula ngokushesha izinkukhu, kodwa amadada nawo anezihlobo zakuqala. Enye yalezi zingu-white white duck agidel. Abamele laleli zwe elihamba phambili bakhula kahle emapulazini nasekhaya. Incazelo kanye nezici ezihlukile zohlobo lwe-Broiler duck agidel, etholakala enhlanganisweni yemikhakha ehlukene, ihlanganisa izinzuzo zabo eziyinhloko.
Incazelo duck cross temp
Uma unquma ukuzala amadada asekhaya, okokuqala kudingekile ukunquma uhlobo, ngoba kuncike esifundeni, akuzona zonke izinhlobo ezizizwa zihle. I-Cross Temp ngummeli omuhle omhlophe weqhwa lomndeni we-duck, ozwa kahle ensimini ye-Ukraine, i-Russia ne-Belarus.
Amadada omgijimi waseNdiya (umgijimi): izici zokuzalanisa ekhaya
Eminyakeni yamuva, isithakazelo ekukhuliseni amadada ajwayelekile aseNdiya abalimi bethu kanye nabalimi bezinkukhu asekhulile kakhulu. Futhi lokhu akumangazi, ngoba le nyoni inamaqanda amahle-futhi iyaziwa ngokudla okunambitheka kakhulu, inyama enomsoco namathenda. Nokho, ukukhuliswa kwamadada kuzophumelela kuphela uma imithetho nemibandela ethile ibonakala.
Yiziphi izinhlobo zamadada
Ngezinye izikhathi ukukhethwa kwezinyoni zezinyoni ekuzalweni kwekhaya kuyinkinga, ngoba emhlabeni kukhona cishe 84. Seluleka ukuba siqale ukucacisa ngokucacile izinhloso zezinyoni. Uma umgomo oyinhloko ukuthola inyama, kufanelekile ukukhetha kusuka ezizalweni zenyama. Uma ufuna ukuthola amaqanda ezinyoni, kuzomele ubheke izinhlobo zamaqanda.
Ukugcina nokuzalanisa amadada asekhaya
Kukhona isigaba sezinyoni ezikhuliswa hhayi inyama noma amaqanda, kodwa ngenxa yezwi labo elizwakalayo futhi elikhulu - lawa amadada amadada. Bangabasizi bazingeli ekubambeni amadada asezilwane, bebakhanga ngempawu ezizwakalayo. Masifunde kabanzi mayelana nendlela yokukhetha, ukunakekelwa nokuzala izinyoni ezinjalo.
Indlela yokuzala amadada ase-broiler ekhaya
Ama-broilers abizwa ngokuthi ama-hybridi ahlanganiswe ngophethiloli wezilwane eziseziqondiso zomzimba. Amadada ase-broiler, njengezinkukhu, athola isisindo ngokushesha, okuvumela izinyanga ezingu-1.5 emva kokuthengwa kwamadada ezinsuku zonke ukuthola umuntu omdala ngesisindo esiphezulu. Khona-ke sizokhuluma ngokukhetha ama-broilers abasha futhi senze izimo ezidingekayo zokugcinwa kwayo.
Humushela incazelo emuva ku-isiNgisi Humusha Incazelo the gray gray Ukrainian duck breed
Akukhona kuphela emapulazini ezinkukhu, kodwa nasezindizeni eziningi kanye nezinkukhu ngokuvamile ziqukethe amadada. Izinhlobonhlobo zamadwala zinkulu kakhulu. Kulesi sihloko sizokhuluma ngodada oluhlaza okwedlulele lwase-Ukraine. Umsuka we-grey e-gray I-Ukraine Le dada ivela kumalwazi we-Ukrainian Research Institute of Poultry Farming.
Incazelo ye-red duck breed Ogar
Ngesinye isikhathi emachibini wedolobha noma emakhaya angasese, amadada amahle ombala ongavamile we-orange angatholakala. Inyoni enkulu kunalokho idonsela ukunakekelwa, futhi abantu bavame ukuzibuza ukuthi imvelaphi yayo nendawo yokuhlala. Namuhla kulesi sihloko esizokutshela ngokuningiliziwe ngodada obomvu nokuzalana kwawo. Imvelaphi nokusabalaliswa kwe-Red Duck, noma u-Ogar, ummeleli womndeni wakwaDuck, we-Anseriformes.
Incazelo yama-broiler breeds amadada
Abalimi bezinkukhu abadume kakhulu yizinkukhu zama-broiler. Baye bazuza ngokushesha, akudingeki ukuthi batshale izimali eziningi kulezi zinyoni, banikeza inyama ebalulekile futhi enomsoco. Ake sihlolisise ukuthi yiziphi izinhlobo ezivamile zama-duck ama-broiler, indlela yokuzizalisa nokuzinakekela kahle.